हेला नगर्नुहोला ! नाग देउतालाई ॐ लेखि शेयर गरौ ! – live 60media
हेला नगर्नुहोला ! नाग देउतालाई ॐ लेखि शेयर गरौ !
हामी यति कंगाल छौ कि आफ्ना पुर्बजहरुले कमाईदिएको अमुल्य मणिलाई, नचिनेर ढुङगा सरह ठान्छौ। त्यसको ज्वलन्त उधाहरण हो “दशा”। गरीब देशका गरीब नागरीक हामी नेपाळिका लागी दुख एक घनिष्ठ सम्बन्धी हो, जहांकी आजभन्दा २५०० बर्ष अघी, यस धर्तीका एक महापुत्रले संसारलाई दुख बिनासको बाटो देखाएका थिए। ति महापुरूष बुद्ध का बाणीहरु आजपनि परिशुद्द अबस्थामा पाईन्छन्। ईमे दुख्ख निरोध गामीनी पतिपदा।यो दुखलाई जरैबाट उखेल्ने बाटो हो।
अन्य समाचार, काठमाडौं- मौसम परिवर्तन हुनेवित्तिकै सामान्यतया मानव स्वास्थ्यमा त्यसको प्रभाव पर्छ। एउटा मौसममा अभ्यस्त भएको शरीरलाई अर्को मौसमसँग अभ्यस्त हुन केही समय लाग्छ। यस्तो बेलामा शरीरको इम्युनिटी डिस्व्यालेन्स हुन्छ।जसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा रुघाखोकी लगायत मौसमी संक्रमणको जोखिम बढ्छ। मौसम परिवर्तनसँगै मानिसलाई रुघाखोकीले सताइरहेको हुन्छ ।
सामान्य अवस्थामा लागेको रुघाखोकी कतै कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण त होइन ? जनमानसमा द्विविधा हुन सक्छ । यसै बिषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे यस्तो सुझाव दिन्छन् :
.मौसमी रुघा खोकीका लक्षण
नाक बन्द हुने,नाकबाट पानी आउने,हाँच्छ्यु आउनेशरीर दुख्ने,हल्का ज्वरो आउने,टाउको दुख्ने ,शरीर दुख्ने सामान्य उपचार तथा आरामले फाइदा गर्ने छोटो समयमा निको हुने
सुख्खा खोकी लाग्ने ,उच्च ज्वरो आउने, एकदम थकाइ लाग्ने ,सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद वा / र गन्ध थाहा नहुने, घाँटी खसखस गर्ने / बोलि परिवर्तन हुने ,निको हुन १० दिन लाग्न सक्ने खाना नरुच्ने अक्सिजन / आइसीयुको उपचार आवश्यक पर्न सक्ने यी दुवै रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने भएको हुँदा छुट्टै कोठामा बस्ने, आफूले प्रयोग गरेका सामान अरुलाई प्रयोग गर्न नदिने । तापक्रम, अक्सिजन हेरिरहने । आवश्यक परे पीसीआर परीक्षण गर्ने ।
अन्य समाचार, काठमाडौं महानगरपालिकामा ९१ जना कोरोना सङ्क्रमित सम्पर्कविहीन भएपछि त्यसले तनाव बढाएको छ । कोरोना सङ्क्रमित भएकाको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई ट्रेसिङ गरी क्वारेन्टाइनमा राखी भाइरसको बाटो बन्द (चेन बे्रक) गर्नुुपर्नेमा सङ्क्रमित नै सम्पर्कमा नआएपछि तनाव बढेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार पीसीआर परीक्षण गराउने क्रममा गलत सम्पर्क नम्बर र ठेगाना टिपाएका ९१ जना सङ्क्रमित सम्पर्कविहीन भएका हुन् । ती व्यक्ति पीसीआरको पोजेटिभ रिपोर्ट खल्तीमा बोकी समुदायमै घुलमिल भइरहेको हुन सक्ने आशङ्का महानगरपालिकाले गरेको छ ।
“सम्पर्कविहीन भएका कतिपय व्यक्तिको दुई हप्ता समय सकिएकाले कोरोना अन्य व्यक्तिलाई सर्ने सम्भावना कम भएको हुनसक्छ,” काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख ज्ञानबहादुर ओलीले बताए । सोमबारसम्म कन्ट्याक ट्रेसिङ गरिएकामध्ये १३ दशमलव ७६ प्रतिशत पोजेटिभ केस भेटिएको छ । हालसम्म १६ हजार १८० जनाको कन्ट्याक ट्रेसिङ गरी पीसीआर गर्दा दुई हजार २२७ जनामा पीसीआर पोजेटिभ आएको केस भेटिएको काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ)ले महानगरपालिका केन्द्रीय राजधानी भएकाले महानगरपालिका एक्लैले चाहेर मात्र कोरोना रोकथाम नहुने बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
अन्य समाचार, काठमाण्डौ – महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाड पर्व लक्षित विशेष अभियान शुरु गरेको छ । सोही अभियानअन्तर्गत चाडपर्वको मौका छोपेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने यात्रुसँग मौकाको फाइदा उठाई बढी भाडा टिकट काट्ने पाँच जनालाई कारवाही गरिएको छ ।ट्राफिक प्रहरी आफैँ यात्रु बनेर कारवाही अभियान चलाएको महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ पर्नेमा कोटेश्वर क्षेत्रको टिकट काउन्टरका विमल खत्री र किरण पौडेल तथा बल्खु टिकट काउन्टरका जीतेन्द्र साह, मदन भुजेल र धर्मेन्द्र यादव छन् ।
प्रहरीले आफैँ यात्रु बनेर निगरानी गर्ने, हिँड्न लागेको गाडीका यात्रुसँग जानकारी लिएर कारवाही गर्ने र यात्रु बस्ने लाममा बसेर फलानो ठाउँ जाने भनी टिकट मागेर श्रव्यदृष्य अभिलेख गरेर पनि कारवाही गर्ने गरिएको छ । यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले पीडित सहायता कक्षबाट सादा पोशाकमा प्रहरी टोली परिचालन गरेको छ । पक्राउ पर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी वृत्तमा बुझाइएको छ ।
अन्य समाचार मानिसलाई धन लाभ हुने २१ वटा संकेतहरु: यो मुर्ती देख्ने बितिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस सधै फलिफाल हुनेछ— हिन्दु धर्ममा शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता अझैपनि जिवितै छ । विभिन्न संकेतका आधारमा शुभ र अशुभका बारेमा जान्न सकिन्छ । त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् । त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिन्छ । जुन यसप्रकार छन् :
१३. जब कुकुरले अचानक जमीनमा पटक पटक टाउको रगडेको देख्नु भयो भने त्यस्तो ठाउँमा गाडेको धन हुन सक्छ । साथै यदी कुकुरले कुनै खाद्यपदार्थ लिएर आएको देख्नु भयो भने पनि तपाईलाई धन प्राप्त हुन सक्छ । १४. जो व्यक्ति सपनामा फलफुल खाएको देख्छ।
← देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नुहोला, ॐ लेखेर एक SHARE गर्नुस्, सात दिनभित्रमा तपाईको अधुरो काम बन्नेछ
पाकिस्तानी काण्ड,नेपालि चेलि रुँदै मिडीया मा जबर जस्ति मेरो भिडियो बनायो ! हेर्नुहोस पूरा भिडियो… →